NEMA Ekesaarala Ndi Iju Mmiri Dabidoro n'Anambra
Previous Article Obianọ Agbapeela Ụlọ Ikpe Mkpegharị n'Awka
Next Article N'Anambra: Ihe Mberede Okporoụzọ Ataala Isi Otu Onye, Merụọ Ndị Ọzọ Ahụ
Ọnụ ọchị wàrànnọọ ndị ahụ nsogbu iju mmiri metụtàrà na steeti Anambra n'ahọ 2019, dịkà ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọnọdụ gbanụgbanụ n'ala Nigeria, bụ ụlọ 'National Emergency Management Agency' (NEMA), ngalabà ya nke mpaghara ndịda-ọwụwa anyanwụ gbàpèrè atụmatụ ikesàrà ha ihe oriri na ihe dị iche iche e ji akwàlite ọnọdụ obibi ndụ.
Ya bụ atụmatụ bụ nke a gbàpèrè site n'aka onyeisi ụlọ ọrụ ahụ na mpaghara ahụ, bụ Maazị Fred Anụsịm, nke ọ bụ òsòtè ya, bụ Oriakụ Eyiuche Aniagor nọchìtèrè anya ya; ma bụrụkwa nke weere ọnọdụ n'ụlọakwụkwọ 'Father Joseph Memorial School Aguleri' dị n'okpuru ọchịchị Anambra East.
N'okwu ya na mmemme ịgbape atụmatụ ahụ, ya bụ onyeisi NEMA kọwàrà na ọ bụ gọọmenti etiti ala anyị tụkọtara ya bụ ihe, ma bụrụkwa nke e mere n'okpuru ụlọ ọrụ ahụ, oge ha na ngalaba ụlọ ọrụ ahụ na steeti Anambra tụchàrà arò ma meekwa ụfọdụ nnyocha.
Ọ kpọkùzịrị ndị ahụ ka ha nabàta ihe ndị ahụ dịka ihe iti aka n'obi, ma rịọkwa ha ka ha na-eke nkwụcha, na-aña ntị ma na-adịkwa njikere maka iju mmiri oge ọbụla n'ihi na hụ bụ ndị bi n'akụkụ mmiri.
N'okwi nke ya oge ọ na-anabàta ihe ndị ahụ n'ahà ndị e bùtèèrè ya, onyeisi ụlọ ọrụ 'State Management Agency' (SEMA) na steeti ahụ, bụ Maazị Paul Odenigbo kèlèrè ụlọ ọrụ SEMA na gọọmenti etiti maka mgbata ọsọ ahụ, ma dụọkwa ha ka ha jisie ike n'ọrụ.
Na ntụnye nke ya, onyeisi oche nchere ogè n'okpuru ọchịchị Ayamelụm, bụ Maazị Benjamin Onyeabọr kèlèkwara gọọmenti etiti na ụlọ ọrụ NEMA, ma kpọkuokwa ndị ahụ nọchitere anya ndị ritara urù na ya bụ ihe ka ha gbakwa mbọ hụ na ihe ndị ahụ rutèrè ndị e mèbèèrè ya aka, dịka ha si eme na mbụ.